Ụmụaka Thiago Silva Akụkọ nke Gbasara Eziokwu Na-adịghị Eke
Home AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ Brazil Ụmụaka Thiago Silva Akụkọ nke Gbasara Eziokwu Na-adịghị Eke
AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ
Ndị egwuregwu bọọlụ Brazil
LB na-egosi Full Story of a Football Genius onye kasị mara aha; “Nnukwu anụ“. Anyị Thiago Silva Child Akụkọ na Iwepụ Biography Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge.
Nyocha a na-agụnye akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndụ ezinụlọ / ndabere na ọtụtụ ihe na-emeghị ka ọ mara banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara na ọ bụ onye nchebe zuru oke. Otú ọ dị, ọ bụ nanị mmadụ ole na ole maara banyere Thiago Silva's Bio nke bụ ihe na-akpali mmasị. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido.
Alex Telles Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Agomụaka Thiago Silva Akụkọ Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
Malite, aha ya zuru oke Thiago Emiliano da Silva. A mụrụ ya na 22nd ụbọchị Septemba 1984 na Rio de Janeiro, Brazil. A mụrụ ya nne ya, Angela Maria da Silva na nna ya, Geraldo Emiliano da Silva.
A mụrụ Thiago Silva n'ọnọdụ ndị siri ike. Nne ya, Angela, nwere ụmụ abụọ - nwa nwoke na nwa agbọghọ - mgbe ọ tụrụ ime na Thiago. N'agbanyeghị ihe isi ike ndị ọ na-enwe, o kpebiri ịmụọ nwa ya nwoke nke Poda Ogbenye n'oge ọ bụ nwata.
Thiago toro na ụmụnne ya; Erivelton Emiliano da Silva na Danila Emiliano da Silva n'ime obodo dị egwu, n'ime obodo Rio de Janeiro. Thiago na ezinụlọ ya diri nsogbu siri ike na ịda ogbenye na ọrịa. Iji mee ka ihe ka njọ, ndị nne na nna Thiago kewara n'otu oge ọ kacha dị ha mkpa. N'okwu ya;
“Mgbe m bụ nwata, agụụ papa m na-agụ m. Ndị mụrụ m kewara mgbe m bụ nwata na Ọ metụtara m na mmụọ. Kaosinadị, emesịrị m nwee nna nna n'ụdị a nna-ukwu onye na-atụ egwu Chineke. ”
Ihe kwesiri ekwuru bu eziokwu na Thiago tolitere David Luiz ndị nne na nna ya bụ ezi ndị agbata obi na ndị enyi ya. Ndị nne na nna ahụ hụrụ ụmụ ha ka ha nwee mmasị na football nke ghọrọ onyinye ha.
Gabriel Veron Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Thiago na ezi enyi ya David mechara mee ka ụmụ ha lelee anya ka ha rụọ ọrụ mascot maka abụba mba Brazil. Mgbe arụ ọrụ mascot gasịrị, akara aka mere ka ha abụọ na-agbaso ụzọ dị iche iche iji nwee ọganiihu ọrụ.
Duo emeghị naanị ka ọ pụta ìhè maka ọrụ mascot, ha dị ka kpakpando bọọlụ na-eme ma bụrụ kpakpando afọ ole na ole.
Ụmụaka Marquinhos Akụkọ nke Gbasara Akụkọ Eziokwu
Agomụaka Thiago Silva Akụkọ Nke Na - Nkpebi Ọrụ:
N'ịbụ onye bi na mita 50 site n'otu n'ime ụlọ ndị dị na Rio, ọ bụ mmetụta ọjọọ nke ndị isi ọjọọ kpatara gburugburu ebe a ma ama.
"Anyị na-anụ mgbe niile ịgba égbè. Ndị uwe ojii ga-abata n'ógbè ahụ ebe m bi n'oge. Mgbe m rutere n'ụlọ m ga-ekele Chineke maka ịbịakwa n'ụlọ. "
Kama ịbanye n'òtù ndị omempụ, Thiago họọrọ ịgbaso Chineke ma na-agbaso nrọ ya nke ịghọ ọkachamara n'ịgba bọl dịka ndụmọdụ nna ya dụrụ ya ọdụ. Enweghị nna nna ya, Thiago agaghị anọ ebe ọ nọ taa.
“Papa m na-anọnyere m mgbe nile, na-enyere m aka na-enweghị atụ.”
Chetara Thiago nke nna ya.
Ọ bụ Alisson Becker Child Story Plus Ihe Ndị Na-adịghị Eke Ọhụụ
Thiago Silva Biography Eziokwu - Nsogbu Mgbalị:
N'agbanyeghị na ndị nne na nna ya nwere ego ole na ole, Thiago na-achọta mgbe niile ụzọ ọ ga-esi na-egwu bọl ma nọgide na-azụ. Dị ka football si kwuo;
“Mgbe ụfọdụ, m na-eyi uwe ụlọ akwụkwọ m mgbe m banyere bọs na-aga ọzụzụ - n'ụzọ ahụ anaghị m akwụ ụgwọ. Ndị ọkwọ ụgbọ ala ga-asị, 'Biko nwa okorobịa, bọs a agaghị ụlọ akwụkwọ gị'. Ana m agwa ha eziokwu mgbe niile. Ekwuru m, 'Agaghị m ụlọ akwụkwọ mana ọ bụrụ na ị nwere ike inyere m aka ime ka nrọ m mezuo, m ga-enwe ekele ruo mgbe ebighi ebi'. Ọ dịghị mgbe ha tufuru m, ha na-ahapụ m ka m gaa ọzụzụ, ana m ekele ndị ọkwọ ụgbọ ala na agbata obi m "
Dị nnọọ ka ndụ adịghị mfe maka Thiago, njem ya na ndụ ọkachamara adịghị iche. Thiago enweghị ike ịbanye ná mba ndị Brazil n'oge mbụ wee malite igwu egwu n'etiti ogige dị na mpaghara nke abụọ na mpaghara Rio nke Janeiro. Nke a bụ mgbe ọ matara Marcelo onye bụ enyi ya kachasị mma na onye otu.
Rodrygo na-aga Akụkọ nwata
Thiago Silva Bio - Bilie Iji Mara Aha:
Ma site n'ịrụsi ọrụ ike na ịdọ aka ná ntị, ọdịda mbụ nke Thiago ghọrọ ihe ịga nke ọma. O mechara nweta ohere ka a hụ ya na Europe ebe ọ sonyeere Porto B maka nde € 2.5 na 2004. Mgbe otu afọ gasịrị na Portugal, ọ sonyeere Dynamo Moscow na Russia.
Thiago enweghi obi iru ala na oyi oyi nke Russia nke huru ya ka oria oria nje. N'ụzọ dị mwute, a chọpụtara na Silva na ụkwara nta, ọ nọrọ n'ụlọ ọgwụ ruo ọnwa isii. Ọrịa ya bịara ka njọ n'oge na-adịghị anya ma ndị dọkịta gwara ya na ọ gaara anwụ ma ọ bụrụ na a gaa n'ụlọ ọgwụ izu abụọ ka e mesịrị. Dị ka Silva si kwuo;
"Ọ bụ agha kasịnụ ná ndụ m. Ekwesiri m ịnọ n'ụlọ ọgwụ maka ọnwa 6 ruo mgbe m gbakere. "
Mgbe ọ gbakere, Silva kpebiri ịla ezumike football ma laghachi Brazil. Nne ya rịọrọ ya ka o chegharịa mkpebi ya nke o mere. Kama ịlaghachi na Russia, Silva choro igwu egwu maka ụlọ ọrụ Brazil ya, Fluminense.
Matheus Pereira Storymụaka Akụkọ Gbasara Eziokwu Ndị Na-adịghị Eke
Mgbe ọ na-arụ ọrụ ọkwá ya n'ebe ahụ, Silva ghọrọ arụsị nye ndị na-akwado Fluminense na arụmọrụ ya.
Uwe ejiji na-acha ọcha nke ọ na-eyi n'oge egwuregwu wee ghọọ ihe omume n'etiti ndị nọ n'afọ iri na ụma na Rio de Janeiro bụ ndị kwadoro ya tricolor. Ọ naghị ewe oge tupu Thiago Silva ghọrọ onye nchebe kachasị mma na Brazil.
Ihe omume a dọtara ụlọ ọgbakọ ndị Europe kacha elu. Mgbe ọnwa ise chụrụ na oge mkparịta ụka elekere anọ, Silva kwetara ịkwaga Milan ebe ụwa wee mata ya. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Thiago Silva Storyhụnanya Akụkọ na Isabele da Silva:
Dịka ọ na-eme nke ọma na ọrụ ọkachamara ya, Silva na-eme nnukwu ihe ná ndụ ya. Thiago Silva enwewo mmekọrịta ya na nwa obi ya bụ Isabele da Silva.
Mkpakọrịta ha weere ha site n'ọnọdụ kacha mma na ezi ịhụnanya. Tiago chetara na otu n'ime ncheta nwata ya na-ekwupụta ịhụnanya ya maka Isabele ma kwere na ha nwere ike ịlụ di na nwunye n'otu ụbọchị. Nke a mesịrị mezuo ma ndị nwere ịhụnanya lụrụ di ma bụrụ ndị a gọziri agọzi ụmụ nwoke aha ya bụ Isago na Jago.
Kevin De Bruyne Nwatakịrị Akụkọ Gbasara Eziokwu Ndị Na-agbanweghị Ihe
Thiago Silva egosila na ụwa dị mkpa nwunye ya dị na ndụ ya na otu ezigbo nna ọ bụ. Ọ na-anọ mgbe niile iji hụ ọmụmụ nke ụmụ ya, na-arụ ọrụ dị ka ezigbo nna.
Onye na-akwado Ronaldo n'ụlọ ya:
Cristiano Ronaldo'eme ka ndi mmadu mara na ha amaghi. Nwunye Thiago Silva, Isabele enweghi ike iguzogide foto na Portuguese kpakpando.
Isabele jidere ohere maka foto ozugbo di otu di ya PSG dọtara Real Madrid na abalị Champions League. Ma ọ dịkarịa ala, o nwere ihe ọ ga-ewepụ n'abalị ahụ mgbe ọ nọsịrị n'okporo ụzọ siri ike nke dị n'etiti abụọ kachasị ike na Europe.
David Luiz Biography Eziokwu - Enyi na-enweghị atụ:
David Luiz na Thiago Silva abughi nkewa site n'otu ụbọchị. Ha bụ ezigbo ndị enyi hụrụ nnukwu nrọ ha maka ịgba bọl na ọkwa ọkachamara ghọrọ eziokwu. N'okpuru ebe a bụ foto mmetụta uche nke David na Thiago.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụAnyị Thiago Silva Nwatakiri Akuko na akuko ihe omuma. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n’isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị !.
Ivan Toney Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Emmanuel Dennis Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Rodrigo De Paul Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Patson Daka Nwatakiri Akụkọ nke Gbasara Eziokwu Ndị Na-adịghị Agbanwe
AC Milan Football Diary
Ndị isi egwuregwu Chelsea FC FC
Eder Militao Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Antony Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Matheus Cunha Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Hinmụaka Raphinha Akụkọ nke Gbasara Eziokwu Ndị Na-adịghị Agbanwe
Carlos Vinicius Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Allan Loureiro Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Gabriel Magalhaes Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Gabriel Barbosa Childhood Akụkọ gbakwunyere Ezigbo Ihe Ndị E Dere Ndụ
Gabriel Martinelli Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Biography Eziokwu
Kasị Ochie Ndị Kacha Elu
1 afọ gara aga
Daalụ. Obi dị anyị ụtọ na ị hụrụ isiokwu anyị n'anya gbasara Thiago Silva
Manuel Locatelli nwa akwukwo n'akwukwo ihe omuma
Hakan Calhanoglu Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Rafael Leao Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Nwere ike 4, 2021
Nwere ike 3, 2021